Maitiro Ekusarudza Email Kushambadzira Nyanzvi
Chishanu, January 29, 2010 Svondo, October 4, 2015 Scott Hardigree
Muchikamu chekutanga (Unogona Kuda Email Nyanzvi Nyanzvi Kana…) takakurukura kuti rini uye nei ringave zano rakanaka kubvumirana nenyanzvi dzine, yakazvipira, yeemail yekushambadzira. Iye zvino isu ticharondedzera iwo anotungamira iwo maitiro ekufunga usati wahaya an email kushambadzira agency, email wekushambadzira wezano kana we-mumba email wekushambadzira maneja. Sei?
Kazhinji makambani anoita sarudzo yavo zvichibva nenzira isiriyo, iyo inokonzeresa kushushikana, kusashanda, uye huwandu hwakakura hwekurasika kwekugadzira uye madhora.
Zvinhu Zvishanu Zvausingafanire Kuita
Usatapudza yako yekutsvagisa nzvimbo. Ehe, nzira inobatsira kwazvo yekuvaka kuvimba iri muhukama hwekutarisana, asi izvo hazvireve kuti kuvimba hakugone kuvakwawo kumahombekombe akapatsanuka kana makondinendi echinhu icho. Ramba uchifunga kuti izvo zvauri kutsvaga ndizvo zvakakodzera kukodzera. Kurambidza kutsvaga kwako kubva pakutanga kuenda kune yakatsanangurwa nzvimbo yenzvimbo kuri kuganhurira zvisina basa. Nebhajeti rako rekushambadzira uye ROI iri panjodzi, iwo matanda akangofanana. Muzuva rino reemail neWebEx, kutaurirana kuri nyore uye ipapo. Muchokwadi, patinosangana mumunhu nevatengi vedu (kunyangwe ivo vachida nguva yekuchengetedza kana masevhisi akanyatsogadziriswa), misangano inowanzo tarisa uye inoshanda nekuti isu takazvironga pamberi uye nguva ishoma.
Usatarise kunze kwevashandi zvichienderana nehukuru. Kana iwe uri kambani diki, haufanire kutonga kunze kushanda nepfuti-yeku-hire nekuda kwekuti ivo vanopa mamwe masevhisi uye vane ruzivo rwakawanda kupfuura iwe rwaunoda; chokwadi, unogona kunge usiri nzvimbo yakakura yemubhadharo kwavari asi pamwe vane hunyanzvi chaihwo hwaunoda.
Saizvozvowo, vatengi vakakura havafanire kusarudzira madiki madiki kana nyanzvi dzakazvimirira kubva pakufunga kwavo. Vane tarenda vanhu vanodzora pazvitoro zvidiki vanogona kuve neruzivo rwakawanda kupfuura rwenzvimbo yekushambadzira email kana vepakati-vevashandi vaungazopihwa kwauri kune hombe yakazara-sevhisi agency. Iko kutarisisa, hunyanzvi, uye mazano akakosha.
Usaite indasitiri ruzivo ive inofanirwa-kuve nayo. Kushambadzira pros ine yakawanda yechikamu ruzivo inogona kunge iri pasi peindasitiri yeboka-funga. Hapana rimwe boka kana munhu angazomboziva zvakanyanya sezvaunoita nezve yako indasitiri, saka iwe unofanirwa kuvashandira ivo nezvavanoziva: hunyanzvi nesainzi yekutengesa email.
Chimwe chezvinhu chandinoda nezvekuva muemail kushambadzira ndiko kuyambuka-pollination yemazano akawanikwa kubva mukushanda kune akasiyana maindasitiri. Indasitiri yega yega yakasarudzika, asi ivo vese vanogovana zvakafanana maitiro. Kazhinji izvo zvatinodzidza kushandira mutengi mune imwe indasitiri zvinokonzeresa nyowani pfungwa kune mutengi mune imwe.
Usabvunze (kana kufadza) basa rekufungidzira. Mhedzisiro yekufungidzira kana bvunzo ndiyo bane yebhizimusi rebazi, zvakafanana zvinowirirana neemail-centric. Mishandirapamwe yakasarudzika yakafanana nesteroid, ivo vanowanzo kuwandisa varatidziri? kugona. Asi chikonzero chikuru chekusabvunza spec basa ndechekuti tarisiro dzakanakisa - iwo aunonyatsoda - haazozviite. Havafaniri kudaro. Kunyanya pavanenge vachida kusvetuka kuburikidza nekufungidzira hoops kwauri, zvakanyanya iwe unofanirwa kufungira. Kana vakagadzirira kupa basa ravo hakufanirwe kuve nemusika wakanaka kwazvo nazvo.
Usadzivise mibvunzo nezve yako bhajeti. Usarega chero munhu achikuudza kuti mari (kana bhajeti) haitaure. Sangano rega rega kana rekunze rine vamwe vatengi bhajeti shoma, yakasvika kuburikidza neruzivo uye inofungidzirwa muchidimbu nehupfumi uye yavo yazvino mutengi mutoro. Ndicho chikonzero nei zvichikosha, kuitira kuitisa ongororo ine ruzivo, kuti iwe uve nerimwe zano rekuti rako bhajeti chii kana kuti rinofanirwa kunge riri. Pamwe iwe wakave nechiitiko chisingafadzi nekuzivisa bhajeti yako pakutanga kana zvawaifunga kuti zvaive pachena (rangarira yekutanga webhusaiti iwe yawakagadzira?) Zvinoitika. Asi seyakajairwa mutemo, kana iwe uchitaura netariro inofarira, ita hurukuro yakasununguka kana zvasvika kune rako bhajeti. Pakupedzisira zvinokusevha nguva, simba, uye mari.
Saka ungasarudza sei email wekushamwaridzana naye?
Sarudza zvaunoda. Chinhu chakanyanya kushata iwe chaungaite kubhadhara basa uyezve usavarega vachizviita. Iwe unoda here munhu wekutungamira kana mumwe munhu wekutevera? Iyo femu inogona kuvandudza zano kana nyanzvi pakuurayiwa? Chipangamazano anofarira kunakidzwa kana iro rese bhizinesi? Mushandi kutora maodha kana mumwe munhu anozopokana nekufunga kwako?
Ita hurukuro. Tumira tarisiro e-mail, kana kuvapa runhare. Shandisa maminetsi mashoma parunhare pamwe chete uye iwe unowana nekukurumidza pfungwa yemakemikari uye kufarira. Vabvunze nezvenhoroondo yavo, kuti vatengi vavo varipi, izvo zvavanogona kuita.
Ita kuti vakoke kuti vaongorore zvishoma zvezviitiko zvidzidzo. Ramba uchifunga kuti hausi kutarisa kuti uone kana vaine mibairo yakanaka yekumhan'ara (vese vachadaro) asi kuti unzwisise kufunga kumashure kwekuti vakasvika sei pamhinduro dzavo. Iwe unozodzidza nezve maitiro avo, kuti ndeapi, mashandiro awo, uye kuti angakwanise sei kambani yako netsika. Izvo zvine maitiro here? Kufuridzirwa-kwakavakirwa? Dhata-inotyairwa?
Paunowana kukwana kwakaringana, kurukura navo nzira yakanakisa yekuona hukama hwakareba uye hunobudirira. Uya kuzoburitsa chibvumirano pane zvaunotarisira kuti uwane muripo uye masevhisi. Wobva wapfura starter pfuti uye varege vashande.
Tags: kuvaka kwechikwataWordPress